समाचार - पहिलो एडिसन बल्ब पछाडि शुद्धको सुन्दरताको लागि बल्बको पछि लाग्छ
पहिलो एडिसन बल्ब पछाडि शुद्धको सुन्दरताको लागि बल्बको पछि लाग्छ
१ 180० In मा, एन्लिग्स आविष्कारक हम्फ्री डेभिले पहिलो इलेक्ट्रिक बत्ती सिर्जना गर्‍यो। उनले कोइलाबाट बनेका डण्डहरू जोडे, जो रासायनिक तत्व कार्बनको रूपमा रहेको थियो, दुईवटा तार भएको ब्याट्रीमा। यद्यपि प्रकाश लामो समय सम्म टिकेन, यसले के देखाउँदछ कि केही सामग्री यति तातो भयो कि तिनीहरू चल्छन् जब तिनीहरूबाट बिजुली बित्दछ। १ 1870० को दशकमा, अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एडिसनले इलेक्ट्रिक लाइट बल्बको प्रयोग गरे। उसको संस्करण एक वायु तंग ग्लास केस थियो जसमा एक लोप गरिएको तार थियो जसलाई फिलामेन्ट भनिन्थ्यो, जुन विद्युत्को प्रवाहसँग जोडिएको थियो जसलाई करन्ट भनिन्छ। यदि हालको पर्याप्त पर्याप्त थियो भने, फिलामेन्ट चम्किलो सेतो तातो थियो। शुरुको फिलामेन्ट लामो समयसम्म टिकेन, तर १ 1879 in मा उनले कार्बनबाट बनेको एक स्थायी फिलामेन्ट सिर्जना गरे। व्यावहारिक लाइट बल्बको जन्म भएको थियो।
हामी मध्ये धेरैलाई माथि कथा थाहा छ, तर थाहा छैन पहिलो बल्ब कस्तो देखिन्छ।
हो, यो लगभग यो जस्तै।
हामी बल्ब आविष्कारकहरूको स्मृतिलाई कदर गर्न अनौंठो उत्पादनहरूको ब्याच प्रकाशित गर्दैछौं जुन भित्र फ्लेक्सिबल एलईडी फिलामेन्ट हुन्छन् जुन डीसी २ 24 वीको नेतृत्वमा डिम्मेबल ड्राइभर द्वारा संचालित हुन्छ।
हामी ईमान्दारीपूर्वक यस श्रृंखला को डिजाईन डिजाइनर साथीहरु लाई आमन्त्रित छौं।
यहाँ, म उद्योग दृश्यबाट सन्दर्भको रूपमा डिजाइनरहरूको लागि डिजाईन दिशाहरू सूचीबद्ध गर्न चाहन्छु।
१. बल्बको आकार, बल्ब एकदम ठूलो हुन सक्दैन - किनकि यो यति ठूलो छ भने, तौल धेरै हुन्छ र गिलास हुकले वजन नहुन सक्छ, त्यसैले हामी २०० मिलिमिटरभन्दा बढी न्यून बल्बको व्यास सल्लाह दिन्छौं, र उच्च 300mm भन्दा बढि
२. लचिलो फिलामेन्ट संरचनाहरू, लचिलो फिलामेन्ट संरचनाले कुनै पनि संरचनालाई तपाईं छवि बनाउन सक्नुहुनेछ यो शीशाको आकारको साथ राम्रोसँग मिलाउन आवश्यक छ।
Glass.गिलासको र color्ग, यो विभिन्न प्रकारका र colors्गहरू हुन सक्छ, जस्तै स्पष्ट, एम्बर धुम्रपान, तांबे, धातु, इन्द्रेणी रंग, फीड निलो हरियो पहेंलो, तपाईं हाम्रो वर्तमान उत्पादनहरू जाँच गरीएको छ। जस्तै सकेसम्म।
हामी डेकर बल्बको निर्माता हो, हामीसँग आफ्नै ग्लास उड्ने उत्पादन लाइन छ। सब भन्दा कुशल गिलास उडाउने मास्टर।
हामी नेतृत्व टेक प्रकाश उद्योगको गहन स्तरमा छौं, हामीसँग आफ्नै इलेक्ट्रिक इञ्जिनियर विभाग र इलेक्ट्रिक परीक्षण उपकरण र परीक्षण कोठा छ।
केवल सबै नयाँ विकासशील उत्पादनहरूले ईयू नियमन र अमेरिकी नियमहरू र अन्य नियमहरू पालना गर्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न।
बत्तीहरूको शुद्ध सौन्दर्य भनेको यो परियोजनाको पछि लाग्नु हो। हामी बिभिन्न आवाज सुन्न चाहन्छौं। निश्चित रूपमा, हामी केवल चीन मा एक OEM कारखाना बेस हो, त्यसैले तपाईंको विचार सधैं तपाईंको हुनेछ। हामी तपाईंको रेखाचित्र उच्च डिग्री अनुप्रयोगको लागि एक सुन्दर प्रकाशमा बनाउन मद्दत गर्दछौं।